फेरि जम्ला त दमन र विरोधको जोडी ? रोचक प्रसंग – Malika News
फेरि जम्ला त दमन र विरोधको जोडी ? रोचक प्रसंग
काठमाडौं । ‘सभामुख महोदय, बोल्नै नदिने यो त अत्याचारै भयो’, एमाले सांसद विरोध खतिवडाले फ्लोरबाट नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ठट्यौली शैलीमा रुलिङ गरे, ‘मेरो नामै दमन, म दमन गर्छु, तपाईंको नामै विरोध, विरोध गर्नुहोस् ।’
त्यसपछि संसद्मा गलल्ल हाँसो छायो । संसद्को कारबाही अघि बढ्यो । यो दृश्य हो, २०५१ सालको संसद्को । महाकाली सन्धिका बेला दमनले हरेक दिनजसो संसद्मा नियमापत्ति जनाउँथे । कानुनका विद्यार्थी विरोधसँग २०४३ सालदेखिको संसदीय अभ्यासको अनुभव थियो ।
संसद् बैठकमा विरोध उठे कि अब के नियमापत्ति जनाउने हुन् र कसरी संसद् बैठक अघि बढाउने भन्ने पिरलोमा पर्थे, तत्कालीन सभामुख दमननाथ ।
दमननाथ ०४८ देखि ०५१ सम्म सभामुख बनेका थिए भने विरोध ०४३ सालको जनपक्षीय सांसद हुँदै ०४८, ०५१ र ०५६ को सांसद बनेका थिए । ०४८ मा कांग्रेसले एकलौटी बहुमत ल्याएपछि जताततै कांग्रेस सरकारको ‘जगजगी’ थियो ।
कांग्रेसको एकलौटी सरकारका क्रियाकलापविरुद्ध नियमापत्ति जनाउने र सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य बनाउँथे, विरोध । विरोधको विरोधमा एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, द्रोण आचार्य, देवी ओझाहरू पनि संसदमा उस्तै स्वर दिन्थे ।
विरोधले नियमापत्ति जनाएपछि अधिकांश समय उनी संसदमा बोल्न समय पाउँथे । विरोधलाई जहिले पनि बोल्न समय दिएको भन्दै सभामुख दमननाथविरुद्ध सत्तासीन कांग्रेसकै सांसदहरू पनि रिसले मुर्मुरिन्थे ।
एकातिर प्रतिपक्षलाई बोल्न दिनुपर्ने, अर्कोतर्फ प्रतिपक्षलाई मात्र किन बोल्न दिएको भन्दै कांग्रेस रिसाउन थालेपछि अप्ठ्यारोबीच दमनले संसद्मा एउटा सिद्धान्त प्रतिवाद गरे, ‘सरकार बहुमतको, संसद प्रतिपक्षको ।’
०५१ सालको संसद्मा विरोधको एउटा भाषण चर्चित र विवादास्पद बन्यो । अदालतबाट फैसला जितेर नुवाकोटबाट राप्रपाका डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले संसद्मा प्रवेश पाएपछि विरोधले कटाक्ष हानेका थिए । ‘आफैंले नजन्माए पनि कानुनले धर्मपुत्र बनाउन पाइन्छ ।
त्यस्तै जनताबाट नजिते पनि अदालतले राप्रपाका लोहनीलाई धर्मपुत्र जस्तै सांसद बनाइदिएको छ ।’ विरोधको भाषणको राप्रपाका पशुपतिशमशेर राणालगायतका सांसदहरूले संसद्मा चर्को विरोध जनाए । संसद्मा होहल्ला र तनावको अवस्था आयो ।’
विरोधले सभामुख दमननाथलाई कहिलेकाहीं सजिलो पनि बनाइदिन्थे । महाकाली सन्धि पारित गर्ने दिन राति १० बजेसम्म संसद् चलेपछि सभामुख दमननाथ निकै थाकेका थिए । आरामका लागि उनी आफैं संसद् स्थगित गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
विरोधले फ्लोरबाट केही समय संसद् स्थगित गर्दा हुन्छ भनेपछि दमननाथले राहतको सास फेरेका थिए । १५ मिनेटसम्म संसद् स्थगित भएको थियो । विरोध भन्छन्, ‘संसद्को असली अभ्यास गर्न, संसद्लाई जनपक्षीय बनाउन र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसाथ म फेरि सांसदको उम्मेदवार बनेको हुँ ।’
संसद् बलियो भयो भने मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र परिवर्तनहरू बलियो हुने विरोधको भनाइ छ । ०२३ वर्षपछि संसद्मा फर्कन खोजेका दमननाथ लोकतन्त्रलाई साझा बनाउन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बलियो बनाउन र विधिको शासन स्थापित गर्न आफू फेरि संसद्तर्फ आकर्षित भएको बताउँछन् ।
‘सत्ता र नेतृत्वको महत्वाकांक्षा ममा छैन’, दमननाथ भन्छन् । विगतमा राजनीतिक नेतृत्व, सांसदप्रति समाजको हेर्ने दृष्टिकोण पछिल्ला दिनमा खस्कँदै गएको भन्दै जनतामा गुमेको साख फर्काउनेतिर दलहरूले सोच्ने बेला आएको दमननाथको भनाइ छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीरमा कालो मसी पोतियो
January 5, 2019 January 5, 2019 Malika News
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थाल्यो
January 11, 2019 malika news